बालेन होइन, बालेनहरू | SouryaOnline
इन्दिरा प्रसाई २०७९ जेठ ५ गते ६:२३ मा प्रकाशित
मैले २०४७ सालपछि भोट नै हालेकी छैन । किनभने हाम्रो नेपालमा बहुदल भित्रिएपछि मुलुकमा थप व्यक्तिवाद मात्रै मौलाएको देखेपछि मलाई राजनीति प्रति वितृष्णा भएको हो । त्यसैले यसपल्ट पनि मैले बालेनलाई भोट हालेकी छैन । अर्थात् बालेनसँग मेरो व्यक्तिगत कुनै सरोकार छैन । तर म पनि यसै समाजमा र यसै व्रम्हाण्डसँग सरोकार राखिरहेकी मानिस भएकी हुनाले वर्तमानसँग सरोकार राखेकी हुँ । किनभने अहिलेका चेतनशील नेपाली संसारमा हरेक तीन जनामध्ये एकजनाको मुखमा ‘बालेन’ छ । अहिलेको नेपाली संसारै बालेनमय बनेको छ ।
त्यसो त युगौँदेखि नेपाली माटोमा आश्वासनको मैनटोल बालेर थरिथरिका उम्मेद्वार त आएका नै हुन् । तर तिनले Danish लेखक Hans Christian Andersen द्वारा लेखिएको विश्व प्रसिद्ध कथा The EmperorÚs New Clothes मा जुलाहा बनेर आएका ठग दाजुभाइले सम्राट्लाई नाङ्गै पारे झैँ नेपाली जनतालाई नाङ्गो पार्ने काम मात्र गरेका छन् ।
नेतृत्व पङ्तिमा रहेकाहरूको विगतका कुकृत्यको धङधङीले गर्दा मलाई पनि हत्तपत्त कुनै नेताको विश्वासै लागेन । वर्षौँदेखि हरेक उम्मेद्वार बनेर आउनेहरूका ठूलाठूला आदर्शका कुरा सुनेपछि यो त गतिलो होला कि भन्ठान्थ्यौँ हामी । तर परिणाम त विजयी उक्त नेताले आफ्नो र आफ्नै परिवारको भलो त गर्छ नै गर्छ, अझ धेरै जसोले जताको नुनभुटुन खाएको हो त्यतैको भलो गर्न थाल्छन् । त्यसैले नेपालका नेता भनेका ’जुन जोगी आयो कानै चिरेको’ भने झैँ भएका छन् भन्ने सोचमैँ म पनि राजनीतिसँगै वितृष्णित भइरहेँ ।
बालेन तराई मूलका हुनु र काठमाडौँ नेवा राज्य हो भनेर साम्प्रदायिक नारा पनि लगाइन थालिसकिएको छ । हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रवादी व्यक्तिको हत्या गरिने, समुल नै नष्ट गराइने वा पंगु पारेर पाखा लगाउने षडयन्त्र पनि गरिँदै आएको छ । त्यसैले मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेनले पनि फलामका चिउरा चपाएर सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्ने छ ।
इमान्दार, राष्ट्रवादी, दुरदृष्टि र विकासवादी दृष्टिकोणका साथ आधुनिक सोच र सामथ्र्य भएका युवाले मात्र लथालिङ्ग भइसकेको नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । किनभने यतिबेला नेपाल जोगाउन संसारभरिका नेपाली युवाहरूले एक जुट हुनै पर्ने समय पनि आइसकेको छ । त्यसैले म पनि भन्छु बालेन भनेको वर्तमान नेपालको आवश्यकता हो । हाम्रो देशका हरेक अञ्चल, जिल्ला, नगर र गाउँहरूमा हामीलाई बालेनहरू चाहिएका छन् । हामीले बालेन कतैबाट आयात गर्नु पर्दैन । स्वतस्फूर्त रूपमा जताततै छरिएर रहेका बालेनहरू जाग्रत हुनुपर्यो । एउटा बालेन होइन हामीलाई नेपालभरि बालेनै बालेनहरू चाहिएको छ । त्यसैले म भन्छु– ‘बालेन जितुन् ! बालेन नबिकुन् !बालेन आफ्नो लक्ष्यमा टिकुन् ! ’
(साहित्यकार प्रसार्इँको फेसबुकबाट)